ezaposwa ngomhla Juni 24, 2020 by UCarey Gillam
Kucoceko olubizayo lweMonsanto yezimangalo, u-Bayer AG uthe ngolwesiThathu uya kuhlawula ngaphezulu kwe- $ 10 yezigidigidi ukulungisa amashumi amawaka amabango e-US aziswe ngokuchasene neMonsanto ngenxa ye-Roundup herbicide, kunye ne- $ 400 yezigidi ukusombulula amatyala ngaphezulu kweMonsanto I-dicamba herbicide kunye ne- $ 650 yezigidi ze-PCB zamabango ongcoliseko.
Izigqibo kuza kwiminyaka emibini emva kokuba iBayer ithenge iMonsanto nge $ 63 yezigidigidi kwaye phantse kwangoko yabona amaxabiso ezabelo ehla ngenxa yetyala leRoundup.
U-Bayer ubhengeze ukuba uza kuhlawula i-10.1 yezigidigidi ukuya kwi-10.9 yezigidigidi zeedola ukusombulula iipesenti ezingama-75 zamabango ngabantu abaqikelelwa kwi-125,000 abathi batyholwa ngababulali bokhula baseMonsanto's Roundup kubangele ukuba baphuhlise i-non-Hodgkin lymphoma. Esi sivumelwano sibandakanya abamangali abagcinayo amagqwetha ngenjongo yokufaka isimangalo kodwa amatyala abo engekafakwa, utshilo uBayer. Ngaphakathi kuloo mali iyonke, ukuhlawulwa kwe- $ 8.8 yezigidigidi ukuya kwi-9.6 yezigidigidi kuya kusombulula isimangalo sangoku kwaye i-1.25 yezigidigidi ibekelwe bucala ukuxhasa isimangalo esinokubakho kwixesha elizayo, utshilo inkampani.
Abamangali ababandakanyiwe ekuhlawuleni abo batyikitywa kunye neefemu zomthetho ebezikhokele i-Roundup federal multi-district litigation (MDL) kwaye zibandakanya iMiller Firm yaseVirginia, Baum Hedlund Aristei & Goldman inkampani yaseLos Angeles kunye neAndrus Wagstaff firm waseDenver, eColorado.
"Emva kweminyaka yokulwa nzima kunye nonyaka wokulamla okunzulu ndiyavuya ukubona abaxumi bethu ngoku beza kubuyekezwa," utshilo uMike Miller, wefemu yezomthetho yaseMiller.
Inkampani yakwaMiller kunye neBaum Hedlund basebenze kunye ukuphumelela ityala lokuqala lokuya enkundleni, elalimi wase-California uDewayne “Lee” Johnson. U-Andrus Wagstaff uphumelele ityala lesibini kwaye iMiller Firm yaphumelela ityala lesithathu lokuya enkundleni. Lilonke, la matyala mathathu akhokelela kwizigwebo ze-jury ezingaphezulu kwe- $ 2.3 yezigidigidi, nangona iijaji zetyala kwityala ngalinye zathoba izigwebo.
Amajaji kuzo zontathu izilingo afumanisa ukuba i-Monsanto's glyphosate herbicides, enje ngeRoundup, yabangela i-non-Hodgkin lymphoma kwaye iMonsanto yagubungela umngcipheko kwaye yahluleka ukulumkisa abasebenzisi.
Isigwebo ngasinye kwezi zithathu sihamba kwinkqubo yokubhena ngoku kwaye uBayer uthe abamangali kula matyala abafakwanga kulungiso.
U-Bayer uthe amabango e-Roundup exesha elizayo aya kuba yinxalenye yesivumelwano seklasi ngokuxhomekeke ekuvunyweni nguJaji Vince Chhabria weNkundla yeSithili sase-US kwiSithili saseMantla saseCalifornia, oyalele inkqubo yolamlo yonyaka wonke ekhokelele kulungiso.
Isivumelwano siza kuthatha nakuphi na ukufunyanwa kwexesha elizayo kumabango omhlaza ezandleni zamajaji, utshilo uBayer. Endaweni yoko, kuya kubakho ukuyilwa kwe "Class Science Panel" ezimeleyo. IPhaneli yeNzululwazi yeklasi iya kugqiba ukuba ngaba i-Roundup inokubangela i-non-Hodgkin lymphoma, kwaye ukuba kunjalo, ngawaphi amanqanaba asezantsi okuvezwa. Bobabini abamangali kwizenzo zeklasi kunye neBayer baya kubotshelelwa kukuzimisela kweCandelo lezeNzululwazi. Ukuba iPhaneli yeNzululwazi yeklasi igqiba ukuba akukho nxu lumano phakathi kwe-Roundup kunye ne-non-Hodgkin lymphoma emva koko amalungu eklasi aya kuthintelwa ekubangeleni ngenye indlela nakweyiphi na imbambano nxamnye neBayer.
U-Bayer uthe ukuzimisela kweClass Science Panel kulindeleke ukuba kuthathe iminyaka eliqela kwaye amalungu eklasi awayi kuvunyelwa ukuba aqhubeke namabango e-Roundup ngaphambi kokuzimisela. Kananjalo abanakho ukufuna ukohlwaywa, utshilo uBayer.
"Izivumelwano zeRoundup ™ ziyilelwe njengesisombululo esakhayo nesifanelekileyo kwisimangalo esingaqhelekanga, utshilo uKenneth R. Feinberg, umlamli owonyulwe yinkundla kwezi ntetho zokuhlala.
Nangona babhengeza ukuhlala, amagosa aseBayer aqhubeka nokukhanyela i-Monsanto's glyphosate herbicides ebangela umhlaza.
"Inzululwazi enkulu ibonisa ukuba iRoundup ayibangeli mhlaza, kwaye ke, ayinaxanduva lezigulo ekutyholwa ngazo," utshilo umphathi weBayer uWerner Baumann kwingxelo.
U-Bayer ukwabhengeze isivumelwano se-tort tortoge, esichaphazela amabango amafama asebenzisa i-dicamba herbicides ephuhliswe yi-Monsanto kunye ne-BASF ukuba itshizwe kwizityalo ezinganyamezelekiyo ze-dicamba eziphuhliswe yi-Monsanto zibangele ukulahleka kwesityalo nokwenzakala.
Kwilingo elingasekuqaleni konyaka, iMonsanto kwathiwa makahlawule I-265 yezigidi zeedola kumlimi wepesika waseMissouri ngomonakalo we-dicamba drift kwigadi yakhe yeziqhamo.
Ngaphezu kwe-100 amanye amafama enze amabango afanayo asemthethweni. U-Bayer uthe uzakuhlawula ukuya kuthi ga kwi-400 yezigidi zeedola ukusombulula isimangalo se-dicamba esimi kwiNkundla yeSithili sase-US kwi-Mpuma yeSithili sase-Missouri, kunye namabango eminyaka yezityalo ka-2015-2020. Abenzi bamabango baya kucelwa ukuba babonelele ubungqina bomonakalo kwizivuno zezityalo kunye nobungqina bokuba bekudalwe yicicamba ukuze kuqokelelwe. Inkampani ilindele igalelo kulowo ubambisene naye, i-BASF, kule ndawo yokuhlala.
Indawo yokuhlala iza kubonelela "ngezixhobo ezifuneka kakhulu kumafama" athe afumana ilahleko yezityalo ngenxa yokubaleka kwemichiza yokubulala iintsholongwane, utshilo igqwetha uJoseph Peiffer wenkampani yamagqwetha yasePeiffer Wolf, emele amafama amabango e-dicamba.
"Ukuhlala kubhengezwe namhlanje linyathelo elibalulekileyo lokwenza izinto zilunge kumafama afuna nje ukwazi ukubeka ukutya etafileni yaseMelika kunye nehlabathi," utshilo uPeiffer.
Kwangoko kulenyanga a Inkundla yomanyano igwebe ukuba i-Arhente yokuKhuselwa kokusiNgqongileyo yaphule umthetho xa isamkela i-dicamba herbicides eyenziwe nguMonsanto, BASF kunye neCorteva Agriscience. Inkundla ifumanise ukuba i-EPA ayihoyanga umngcipheko womonakalo wedicamba.
Indawo yokuhlala yongcoliseko lwePCB
I-Bayer ikwabhengeze uthotho lwezivumelwano ezisombulula amatyala enkampani athi zimele ukubhencwa kwabo kumatyala abandakanya ukungcoliswa kwamanzi yi-PCBs, eyathi yenziwa yiMonsanto kwada kwangowe-1977. IiPCB. U-Bayer uthe uza kuhlawula i-650 yezigidi zeerandi kwiklasi, eya kuthi ixhomekeke kwinkundla.
Ukongeza, uBayer uthe ungene kwizivumelwano ezahlukileyo neeGqwetha Jikelele laseNew Mexico, Washington, kunye neSithili seColumbia ukusombulula amabango e-PCB. Kule mvumelwano, eyahluliweyo eklasini, iBayer iya kwenza intlawulo ngokupheleleyo malunga ne- $ 170 yezigidi.
U-Bayer uthe ukuphuma kwemali okuza kubakho akuyi kudlula i-5 yezigidigidi zeedola ngo-2020 kunye ne-5 yeebhiliyoni zeerandi ngo-2021 ngemali eseleyo eza kuhlawulwa ngo-2022 okanye kamva.
I-Monsanto Roundup Trial Tracker, Akohlulwanga ulimo, I-BASF, Bayer, California, umhlaza, inkundla, Dicamba, EPA, zolimo, ukutya, Jemani , glyphosate, ulwaphulo, IMonsanto, engeyiyo iHodgin lymphoma, PCB, Yisonge yonke, inzululwazi, Xtend
Dicamba has been used by farmers since the 1960s but with limits that took into account the chemical’s propensity to drift and volatilize- moving far from where it was sprayed. When Monsanto’s popular glyphosate weed killing products, such as Roundup, started losing effectiveness due to widespread weed resistance, Monsanto decided to launch a dicamba cropping system similar to its popular Roundup Ready system, which paired glyphosate-tolerant seeds with glyphosate herbicides. Farmers buying the new genetically engineered dicamba-tolerant seeds could more easily treat stubborn weeds by spraying entire fields with dicamba, even during warm growing months, without harming their crops. Monsanto uxele intsebenziswano kunye ne-BASF ngo-2011. Iinkampani zithe i-dicamba herbicides yabo iya kuba mbalwa kakhulu kwaye ingathambekisi kangako kuneendlela ezindala zedicamba.